म नरम र चाम्रोबीच सहज लेखनको बाटोमा रहेछु : धर्मेन्द्र नेम्बाङ - Nepal's Digital News Paper
धर्मेन्द्र नेम्बाङलगायत स्रष्टाले बहुरंगवादको कुरा उठाएको डेढ दशक नाघ्यो । उनीहरूले रंगवाद, विशेष रंगवाद हुँदै बहुरंगवादसम्म आइपुग्दा थुप्रै कृति प्रकाशन गरेका छन् । यसका अगुवा धर्मेन्द्रले रातो बाघ (उपन्यास), सामान्य बहुरंगवाद एउटा ट्राभलिङ फिलसफीको परिकल्पना (साहित्य सिद्धान्त), युवा विचार युवा नेपाल आमूल परिवर्तनको पक्षमा एक अवधारणा (राजनीतिक सिद्धान्त)लगायत कृति प्रकाशन गरेका छन् । कविता हेपेर लेख्न सक्ने स्रष्टाका रूपमा उनको चर्चा भइरहेको छ । उनकै पछिल्लो कविता संग्रह ‘मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ’ प्रकाशनमा आएको छ ।
–‘मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ’ भन्ने कृति कस्तो प्रकारको हो ?
यो एउटा कविताकृति हो । यो मेरा नयाँ र पुराना कविताहरूको संकलन हो ।
–यसका लक्षित पाठक को हुन् ?
यसमा खास पाठक लक्षित छैनन् । आमनेपाली नागरिक अथवा नेपाली बुझ्छन् भने विदेशी पनि यसका पाठक हुन सक्दछन् ।
–कविताको प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनुभएको छ ?
यसको बजार प्रतिक्रिया राम्रै आइरहेको छ ।
–यो संग्रहका कविता यसअघिकाभन्दा बुझ्न सहज छन् भन्ने छ । कसरी यस्तो भयो ?
म अघि र आज पनि सरल जीवनयापनको बाटोमा छु । यो कृतिलाई सहज भनेका छन् साथीहरूले । जस्तै– कवि उपेन्द्र सुब्बा यस संग्रहउपर सहज लेखन भन्छन् । त्यसकारण यो सरल र चाम्रोबीचको सहज खेलन पो हो कि !
–‘भगवान्को आत्महत्याको जग्गा’को बाटो छाड्नुभएको हो ?
होला । किनभने, अब थेबा सम्बन्धमा डकुमेन्ट्री फिल्म बनाउँदै छु । थेबा भनेको हाम्रो पितृआत्मा हो, जो मुन्धुमअनुसार चुमेक्पा र लादिप्पाको देहमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरू डाँडाकाँडा देशदेशावर उड्थे । चुमेक्पा र लादिप्पाले मानव नरसंहार गर्ने सेतो भालु र चीलजस्तै आकाशमा उड्ने नरभक्षी पक्षीलाई मारेर मानव जातिको रक्षा गरेको थियो । चुमेक्पा र लादिप्पा खेलेको÷डुलेको ठाउँहरू पान्थरमा अहिले पनि सुरक्षित नै छन् ।
–लेखन चाम्रो ठीक रहेछ कि नरम ?
मचाहिँ नरम र चाम्रोबीचको सहज लेखनको बाटोमा रहेछु । कतिपय नयाँ विषय प्रवेश गराउँदै गर्दा अलि बानी परेका मस्तिस्कलाई अलि असहज हुन सक्छ । नयाँ कुरा गर्दा आकलन, आँकडा, गणित, जार्गन नयाँ आउन सक्छन् । त्यसो भएको हुन सक्छ ।
–साहित्यिक आन्दोलनका नाममा अनेक प्रयोग गर्दा पाठक भड्किँदैनन् ?
साहित्यमा, जीवनमा, समाजमा, राजनीतिमा आन्दोलन जरुरी छ । नत्र भने मस्तिस्क जमिएर विकासक्रम जमिएर बस्छ । यसलाई तरल बनाइरहन जरुरी छ । त्यो काम हामीले ग¥यौं भन्ने लाग्छ । लेखन तपाईंले मान्ने खेल मैले मान्नेमा अनेक प्रयोग आउन जरुरी छ । पाठकले नयाँ कुरो जान्ने हक राख्छन् । सधंै एउटै पारामा रम्न मान्छेको मन मान्दैन । दिक्क मान्छ र नयाँहरूको खोजी पाठकको मनले गरिरहन्छ । यो कलाको नियमजस्तै हो ।
–विशेष रंगवादसँग नयाँ कविताकृतिलाई कसरी जोड्ने ?
हालसालमा आइपुग्दा हामी बहुरंगवाद भन्छौं । यो भनेको बहुलवाद । या धेरै वाद या वादहरूको पनि वाद हो । सञ्जाल सिद्धान्तजस्तो । अथवा स्टेफेन हकिङको एम थिअरी या युनिफाइड फिल्ड थिअरीजस्तो । यो पुस्तकको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बहुरंगवाद नै हो ।
–तपाईं त आफूलाई लेखक होइन, खेलक ठान्नुहुन्छ ? रंगवादलाई कवितामा कसरी खेल्नुभएको छ ?
अँ ! म आफूलाई खेलक ठान्छु । खेलक भनेको जीवन र समाजसम्बद्ध । लेखक भनेको चाहिँ कापी र कलमसम्बद्धजस्तो लाग्छ मलाई । खेलक भनेको चाहिँ क्याटलिस्ट । अरू वस्तु परिवर्तन गर्न सम्पूर्ण सहयोग गर्ने आफूचाहिँ फेरि अर्को परिवर्तनका लागि ज्यूँका त्यूँ रहने ।
–कविता के रहेछ ?
कविता वास्तवमा एउटा खेल रहेछ । अथवा जीवनको एक सुस्केरा ।
–आख्यान पनि लेख्नुभएको छ, खेल्न कुनमा सहज ?
खेल्नमा दुवै सहज छन् । दुवैका आआफ्नै दायरा, क्षेत्र र सीमा छन् ।
अभिनेत्री ऋर्चा शर्मा विवाह बन्धनमा
भ्रमण बर्षको गीत रचनाका लागि सार्वजनिक आह्वान
कसिसको दुई म्युजिक भिडियो सार्वजनिक(भिडियाेसहित)
पेरिस म्युजिक कन्सर्टमा गायका रोसालियाकाे दमदार प्रस्तुती
कलाकर्मी संघले थाल्यो जागरण अभियान